သိုင်းကျူး ကိုကို - CeleHits
“ဟေ့…..ရှယ်လီ….ဒါတို့အကို ဂျင်မီတဲ့…´´ ပင်စီ၏ စကားကြောင့် ရှယ်လီမှာ ဂျင်မီဆိုသောလူကို သေချာကြည့်ရင်း ပါးချိုင့်လေးပေါ်အောင် ပြုံးပြလိုက်မိသည်။“အိုင်က ဂျင်မီပါ….´´ သူလှမ်းပေးသောလက်ကို ရှယ်လီလှမ်း၍ဆွဲလှုပ်နှုတ်ဆက်လိုက်သည်။ “ရှယ်လီကို အရင်ထဲက မြင်ဘူးနေတာ…..ဒီနေ့မှ ပင်စီကို မိတ်ဆက်ခိုင်းရတာ…´´ “အို…ရှင်´´ရှယ်လီ အံ့သြမှုကြောင့် ဗမာဆန်ဆန်ထွက်သွားသောအသံလေးကို အားနာသွားပြီး လက်ဝါးလေးဖြင့် သူမပါးစပ်လေးကို ပိတ်ထားလိုက်မိသည်။ ပင်စီကတော့ အနားတွင်ရပ်၍ သူတို့နှစ်ယောက်ကို ပြုံးပြုံးလေး ကြည့်နေသည်။ ဂျင်မီဆိုသောလူက ဘိုကပြားပီပီ လူကောင်ကြီးကထွားထွားကြီးဖြစ်သည်။ နှာတံချွန်ချွန် ဆံပင်ရှည်ရှည်ဖြင့် လူချောတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ နှုတ်ဆက်လိုက်သော ရှယ်လီ၏လက်ကို သူကမလွှတ်ဘဲ ဆက်၍ဆုပ်ကိုင်ထားဆဲဖြစ်သည်။ “ယူက ဘားမားလား´´ “အို…နိုးနိုး…အင်္ဂလို ဘားမား…ခစ်ခစ်´´ သူမ၏ နှုတ်ဖျားမှထွက်သွားသော ဗမာဆန်ဆန်ယောင်ရမ်းသံကြောင့် ဂျင်မီက သူမကို ဗမာလားဟူ၍ မေးသည်ကို ရှယ်လီက ပြာပြာသလဲငြင်းပြီး မဆီမဆိုင် တခစ်ခစ် ရယ်လိုက်သေးသည်။ “ယူက အိုင်ကို အရင်ကတွေ့ဘူးတယ်ဆိုတာ ဘယ်တုန်းကလဲ…´´“ယူကလှတော့ အိုင်ကသတိထားမိတာကြာပြီ´´ “အိုးဂေါ့´´ဒီတစ်ခါတော့ ရှယ်လီသတိထား၍ ဘိုဆန်ဆန်ယောင်လိုက်သည်။
ဂျင်မီရော ပင်စီပါ ပြိုင်တူပြုံးလိုက်သည်ကိုသူမတွေ့လိုက်ရသည်။ “ကဲ ကိုယ်တို့သွားအုံးမယ် ရှယ်လီ……ယူက အိမ်ကိုလာလည်အုံးလေ´´ ပင်စီက ဂျင်မီလွှတ်မပေးသေးသော ရှယ်လီ၏ လက်ကိုကြည့်၍ နှုတ်ဆက်စကားပြောသည်။ “ဘိုင်…ဘိုင်´´ရှယ်လီမှာ ဝတ်ထားသော ဂါဝန်နားစလေးများ ခါယမ်းသွားသည်အထိ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြီး နှုတ်ဆက်လိုက်လေသည်။ ဂျင်မီနှင့်ပင်စီတို့ နှစ်ယောက်စလုံးမှာ ဘိုကပြားများဖြစ်ကြ သည်။ အနောက်တိုင်းသွေးက များသည်။ ဗမာပြည်ပေါက်တွေမို့သာ ဗမာရည်လည်နေခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ဒါပေမဲ့ ရှယ်လီဆိုတာကတော့ ဘိုဆန်ဆန်နေချင်နေသော ဗမာမလေးဖြစ်သည်။ ရှယ်လီ၏ ဗမာနာမည်က အေးအေးသန်းဖြစ်ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးအုံးသောင်းနှင့် မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ကြည်တို့မှ မွေးဖွားလာသော ဗမာမလေးစစ်စစ်ဖြစ်သည်။ ရှယ်လီ၏ မိဘများက သနပ်ဖက်ပွဲရုံဖြင့် ကြီးပွားလာကြသူများဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြောင်းလာကြသည်မှာ ခြောက်လခန့်သာ ရှိသေးလေသည်။ရန်ကုန်ရောက်တော့ အေးအေးသန်းနာမည်ကို ဖျောက်ပြီး ရှယ်လီဆိုသော အမည်ကိုသူမဘာသာကင်ပွန်းတပ်ကာ ဘိုကပြားအသိုင်းအဝိုင်းကို ဝင်ရောက်၍ မိတ်ဆွေဖွဲ့ကာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
အခုတော့ ရှယ်လီမှာ ဘိုကပြားအသိုင်းအဝိုင်းတွင် အတော်လေးဝင်ဆန့်ပြီး သူမ၏ချောမောသော ရုပ်ရည်နှင့် လှပသော ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့် သက်တူရွယ်တူ အသက်(၂၀)ဝန်းကျင် လူငယ်တွေကြားတွင် ရှယ်လီမှာ ရေပန်းစားခဲ့သည်။“ဂျင်မီ….ယူက ရှယ်လီ့လက်ကို ဘာလို့အကြာကြီး ကိုင်ထားရတာလဲ´´ “အိုး..အိုင်မေ့သွားလို့ပါ…´´ ဂျင်မီက အရေးမကြီးသလိုဖြင့် ခပ်ပေါ့ပေါ့ပြောလိုက်သည်ကို ပင်စီက သိပ်ပြီးဘဝင်မကြလှပေ။ “ဘာလဲ……ရှယ်လီက ပင်စီထက်ပိုလှလို့လား´´ “နိုး….နိုး´´ ဂျင်မီက သူမကိုလှည့်မကြည့်ဘဲ ပေါ့ပေါ့တန်တန်ပင် ဖြေလိုက်ပြန်သည်။ “ဂျင်မီ အိုင်ပြန်တော့မယ်´´ “အိုးဂေါ့….ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပင်စီ….အိုင့်အိမ်မှာ မာမီတို့မရှိတုန်း အေးအေးဆေးဆေး တွေ့ရအောင်လိုက်ခဲ့မယ် မဟုတ်လား…..´´ ဒီတစ်ခါတော့ ဂျင်မီက ထိတ်ထိတ်ပြာပြာဖြင့် သူမဖက်သို့လှည့်၍ ပြာပြာသလဲ ပြောလိုက်သည်။ ပင်စီစိတ်ထဲတွင် နဲနဲကျေနပ်သလိုဖြစ်သွားသည်။ “ယူက ဘာဖြစ်လို့ရှယ်လီကို မိတ်ဆက်ချင်ရတာလဲ´´ ပင်စီ၏မေးခွန်းကို ဂျင်မီက ချက်ချင်းမဖြေ။ ဖြေရလည်း အတော်ခက်သွားပုံရသည်။ “ပြောလေ ဂျင်မီ´´ “ပင်စီ့ သူငယ်ချင်းဘဲ… ပင်စီနဲ့ တွဲနေလို့သိကျွမ်းချင်တာပါ…အိုင့်ကို တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့…´´ ဂျင်မီ၏စကားအဆုံးတွင် ဂျင်မီက သူမကိုတောင်းပန်သော အသံလေးပါလာသည်။
ပင်စီ စိတ်ထဲတွင် အနည်းငယ်ကြည်နှုးသွားသည်။ ဒါပေမဲ့ ပင်စီက မိန်းခလေးဘဲလေ။ “အိုင် မလိုက်တော့ဘူးကွာ….ပြန်တော့မယ်….´´“ယူကလဲကွာ…..လိုက်ခဲ့စမ်းပါ……အိုင် မန္တလေးကအပြန် ယူ့ဖို့ဆွဲပြားလေး ဝယ်လာတယ်…..အဲ့ဒါပေးချင်လို့´´ ပင်စီ၏ မျက်နှာလေးမှာ သိသိသာသာကြီးကို ဝင်းပရွှင်လန်းသွားသည်။ “ဒါဆိုလည်း လိုက်မယ်…..ဆွဲပြားယူပြီးရင် ပြန်မှာနော်….´´ ပင်စီက ထပ်တွန့်တက်လိုက်သေးသည်။ ဒါပေမဲ့ ဂျင်မီကတော့ သွားဖြူ ဖြူ လေးတွေပေါ်အောင် ပြုံးလိုက်သေးသည်။ “လာလေ ပင်စီ ဆွဲပြားက အခန်းထဲမှာ….´အိမ်ထဲရောက်တော့ ဧည့်ခန်းထဲတွင် ထိုင်ရန်ပြင်လိုက်သည့် ပင်စီကို ဂျင်မီက လှမ်း၍ ပြောလိုက်သည်။ ဂျင်မီစကားကိုကြားလိုက်တော့ ပင်စီ၏မျက်နှာတွင် တစ်စုံတစ်ခုကို သိနေသလို ဖြစ်သွားပြီး ပြုံးလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ဂျင်မီ၏နောက်သို့ ပင်စီဝင်၍ လိုက်သွားသည်။ အခန်းက ဂျင်မီ၏ အိပ်ခန်းဖြစ်သည်။ ပင်စီအတွက်တော့ ဒီအခန်းကစိမ်း၍မနေပါ။ အခန်းထဲရောက်တော့ ဂျင်မီက သူ၏နောက်မှလိုက်၍လာသော ပင်စီကိုရပ်၍စောင့်လိုက်ပြီး ပင်စီအနားသို့ရောက်သည်နှင့် ဂျင်မီက ပင်စီ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ပွေ့ဖက်လိုက်သည်။ “အိုး……ဂျင်မီရယ်´´ ဂျင်မီက ပင်စီ၏ နဖူးလေးကို နှုတ်ခမ်းဖြင့်ပြွတ်ကနဲနေအောင် စုပ်နမ်းလိုက်ပြီး သူမ၏ နှုတ်ခမ်းအစုံကို ဆက်၍စုပ်နမ်းလိုက်သည်။
ခြေဖျားလေးထောက်ကာ ကိုယ်လုံးလေး ကြွတက်သွားသော ပင်စီ၏ ကျောပြင်ကြီးကို အတင်းညှစ်၍ဖက်လိုက်သည်။ သူမ၏ အာခေါင်ထိအောင် တိုးဝင်လာသော ဂျင်မီ၏လျှာကြီးက ပင်စီ၏ ဝမ်းတွင်းမှ ကလီစာအများကို ဆွဲထုတ်သွားသယောင်ပင် ပင်စီခံစားနေရသည်။ ဂျင်မီက သူမ၏နှုတ်ခမ်းများကို လွှတ်ပေးလိုက်တော့မှ ပင်စီမှာ ဂျင်မီ၏ ရင်ခွင်ကျယ်ကြီးထဲ မျက်နှာလေးကို အပ်မှောက်၍ အမောဖြေနေသည်။ ဂျငိမီက အလကား မနေပါ။ လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ကျောပြင်လေးကို သိုင်း၍ဖက်ထားပြီး ကျန်လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ရင်သားအစုံကို ဝတ်ထားသော ဂါဝန်လေးပေါ်မှ သူ့လက်ဖဝါးကြီးဖြင့် အုပ်၍ဆုပ်နယ်ပေးနေသည်။ အမောဖြေ နေသော ပင်စီမှာ ပို၍မောလာသလိုခံစားလာရသည်။ ဒီကြားထဲမှာပင် ပင်စီက အားယူ၍ ပြောလိုက်သေးသည်။ “ဂျင်မီ ယူပြောတဲ့ဆွဲပြားရော……´´ ပင်စီ၏စကားကိုကြားတော့ ဂျင်မီက နှစ်နှစ်ကာကာပြုံးလိုက်ပြီး သူမ၏နို့သီးလေးတစ်ဖက်ကို စမ်း၍ခပ်ဖွခပ်ဖွလေးညှစ်လိုက်ကာ ပင်စီ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် ကုတင်နံဘေးနံရံတွင်ကပ်၍ထားသည့် မဟော်ဂနီ ဘီဒိုတစ်လုံးကို ဖွင့်လိုက်ပြီး အထဲမှ စက္ကူ ဗူးလေး တစ်ခုကို နှိုက်ယူလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ပင်စီဘက်သို့ပြန်၍ လှည့်လိုက်သည်။“ရော့ ပင်စီ…..ယူ့အတွက် ပရဲဆင့်….´´ ပင်စီ စက္ကူဘူးလေးကို ယူပြီးဖွင့်လိုက်သည်။
“အိုး…ဂေါ့….ဗဲရီးဗြူးတီးဖူး…..´ပင်စီတစ်ယောက် ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ဘဲ ခုန်ဆွခုန်ဆွနှင့် ပျော်မြူးသွားသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဂျင်မီမှာ သူ၏ကိုယ်ပေါ်မှ အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်ပြစ်နေသည်မှာ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးတစ်ထည်သာ သူ့ကိုယ်ပေါ်တွင် ကျန်တော့သည်။ ပင်စီက ဗူးထဲမှ ဆွဲပြားလေးကို ထုတ်၍ကြည့်နေစဉ် ဂျင်မီက ပင်စီ၏ အနားသို့ကပ်၍လာသည်။ “ပေး ပင်စီ……အိုင် ဆွဲပေးမယ်´ကျးဇူးတင်သောမျက်လုံးတွေဖြင့်ကြည့်ရင်း ဆွဲပြားလေးကိုဂျင်မီထံသို့ လှမ်း၍ပေးလိုက်သည်။ ဂျင်မီက ဆွဲပြားလေးကို ယူလိုက်ပြီး သူမ၏လည်ပင်းမှ ဆွဲကြိုးလေးတွင် ချိတ်ပေးနေသည်။ ဂျင်မီဆွဲပြားချိတ်ဆွဲပေးနေသည်ကို ငုံ့၍ကြည့်နေသော ပင်စီ၏မျက်လုံးတွေက အတွင်းခံဘောင်းဘီတစ်ထည်ရှိတော့သည့် ဂျင်မီ၏ ပေါင်ကြားထဲသို့ အကြည့်ရောက် ၍သွားသည်။ ဘောင်းဘီပါးပါးလေးမှာ ရှေ့ဖက်သို့ အလုံးလိုက်ကြီး အထုတ်အထည်နှင့် ဖုထွက်နေပြီး ရှေ့မျက်နှာစာမှ အမြှောင်းလိုက်ကြီး စင်းစင်းကြီးဖြစ်နေသော အရာကို ထင်ထင် ရှားရှားသိသိသာသာကြီးတွေ့လိုက်ရပြီး ပင်စီ ဆက်၍ကြည့်နေလိုက်မိသည်။
ပင်စီ၏ မျက်နာလေးတစ်ခုလုံး တဖြေးဖြေး နီရဲ၍လာသည်။ဆွဲပြားလေးချိတ်ဆွဲပေးပြီးသွားတော့ ဂျင်မီက သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကို ငြင်ငြင်သာသာလေး ပွေ့ဖက်လိုက်ပြီး သူမ၏ပုခုံးလေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ဆီမှ ဂါဝန်သိုင်းကြိုးလေးတွေကိုဖြည် ကာ ဂါဝန်ကို အောက်သို့ ဆွဲချွတ်ချလိုက်သည်။ ပင်စီ၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် ဘရာစီယာလေးတစ်ထည်နှင့် အတွင်ခံဘောင်းဘီလေးတစ်ထည်သာ ကျန်တော့လေသည်။ ဆက်၍လည်း ဂျင်မီ က ပင်စီ၏ ဘရာစီယာလေးကို ချွတ်ပြစ်လိုက်ပြန်သည်။“အိုး….ဂျင်မီရယ်…..´´ဖြူ ဖြူ ဖွေးဖွေး လှုပ်ခတ်သွားသော နို့သီးလေးတွေက ဂျင်မီ၏ လက်ဖဝါးထဲတွင် ပျောက်၍နေသည်။ နို့လေးတစ်ဖက်ကို ဖွဖွရွရွလေး ဆုပ်နယ်ရင်း သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကို ဂျင်မီက ကုတင်ဖက်သို့ရွေ့လိုက်သည်။ “လှဲလိုက်လေ ပင်စီ´´ ပင်စီ စကားမပြောတတ်သလို ဂျငိမီအားမျက်လုံးကြီးများ ဝေ့၍ကြည့်လိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်သို့ ခွေခွေလေးလှဲချလိုက်သည်။ ထိုအခိုက် ဂျင်မီက သူ၏ကိုယ်ပေါ်မှ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ကို ချွတ်ချလိုက်သည်။ “အိုး……ဂေ့ါ…´´ ပင်စီ တိုးတိုးလေးပြောလိုက်ပြီး ကြည့်နေသော မျက်လုံးလေးတွေက ဝိုင်းသွားပြီး အရည်လေးတွေ လဲ့သွားသည်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ချွတ်လိုက်တော့ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ဖြစ်သွားးသော လီးကြီးက ဖြောင်းကနဲထောင်၍ ထွက်လာသည်။
ပင်စီကြည့်နေမှန်းသိ၍ ခဏတာမျှ အကြည့်ခံရင်း ဂျင်မီက ကုတင်အောက်မှရပ်လျှက်ပင် သူမ၏ နို့အုံလေးနှစ်လုံးကို လက်ဖြင့် ဆော့ကစားနေသည်။ ပြီးမှ ဂျင်မီက ကုတင်ပေါ်သို့လှဲချလိုက်ပြီး သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ဖယ်လိုက်ရာက သူ့မျက်နှာကို ရင်သားနှစ်မွှာစီသို့ မှောက်ချ၍ နို့လေးတွေကို စို့ပေးသည်။“ဟင်း….ဟင်းဟင်း….ဂျင်မီရယ်…ဒါလင်ရယ်…ဟင်း….ဟင်း´´နို့အုံလေးကို ဂျင်မီ၏ပါးစပ်သို့ အတင်ဖိကပ်ပေးရင်း ပင်စီ၏လက်လေးက ဂျင်မီ၏ ကျောပြင်ကြီးကို ပွတ်သပ်ပေးကာ မပွင့်တပွင့်လေးငြီးရှာသည်။ ဂျင်မီက ပင်စီ၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် တစ်ထည်တည်းသာ ကျန်တော့သည့် အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကို ဆွဲ၍ချွတ်ပြစ်လိုက်သည်။ ပြီးလျှင် သူ၏လက်ဖဝါးလေးက ပင်စီ၏ ဖောင်းဖောင်းမို့မို့ စောက်ဖုတ်လေးကို အုပ်၍ကိုင် လိုက်သည်။ အမွှေးကြဲကြဲ ရှည်ရှည်လေးတွေကို စမ်းမိသည်။ နှုတ်ခမ်းသားတွေပေါ်ဆက်ပြီးစမ်းကိုင်ပြန်တော့ ကြက်သီးထ၍ အနေခက်သွားသော ပင်စီက ဒူးနှစ်လုံးကို ထောင်ပြစ်လိုက်သည်။ နို့တစ်ဖက်ကို စို့လျှက်က သူမ၏ပေါင်ကြားထဲမှ ဂျင်မီ၏လက်က စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားအစုံမှသည် အကွဲကြောင်းလေးကို စမ်းလိုက်ပြန်သည်။ အရည်ကြည်လေးတွေကို စေးထန်းထန်းလေးထိတွေ့လိုက်မိသည်။
နုနယ်၍ ခံစားမှုအာရုံ အထွတ်အထိပ်ရှိသော နေရာလေးကို ဂျင်မီကထိထိမိမိကိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ စမ်းတဝါးဝါးဖြင့် တရွရွကိုင်တွယ်ထိတွေ့နေတာ ဖြစ်လေတော့ ထိထိမိမိကိုင်တာထက်ပိုပြီး ပင်စီမှာ ခံစားရခက်၍လာသည်။“ဂျင်မီရယ်…..ဟင်း…..ဟင်း……ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲကွယ်……ဟင်း….ဟင်း´´ဂျင်မီအကွဲကြောင်းတစ်လျှောက် စမ်းလိုက်ပြီး အကွဲကြောင်းထဲမှ မပေါ်တပေါ်ဖြစ်နေသော အစေ့ကလေးအားနှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုအကြားသို့ လက်ညိုးထိပ်ဖြင့် ကော်၍နှိုက်လိုက်သည်။ “အိုး…အိုး…ဒါလင်ရယ်´´ ပင်စီ၏ ဖင်လုံးလုံးလေး ကြွ၍တက်လာသည်။ဂျင်မီက မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ပုံဖြင့် ထထိုင်လိုက်ပြီး သူ၏တောင်မတ်နေသော လီးကြီးကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့်ဆုပ်ကိုင်၍ ဂွင်းတိုက်လိုက်သည်။ “ပင်စီ ထလေ….လေးဖက်ထောက်ပေး´´ပင်စီ ဘာမှမပြောရှာပါ။ ဂျင်မီထံသို့ မျက်လုံးတစ်ချက်စွေကြည့်လိုက်ပြီး လေးဖက်ထောက်၍ပေးလိုက်သည်။ ဂျင်မီက သူ့လီးကြီးကို ဂွင်းတိုက်ရင်း ဒူးထောက်ကာ သူမ၏ နောက်နား သို့ကပ်လိုက်သည်။ “ဒါလင်….ဖြေးဖြေးနော်´´ လေးဖက်ထောက်လျှက်မှ ပင်စီက လှမ်း၍ပြောသည်။ ဂျင်မီက ပင်စီ၏ ဖင်နှစ်ခြမ်းကြားမှ နောက်သို့ စူစူလေးထွက်နေသော စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် အသာလေးဖြဲ၍ လီးထိပ်ကြီးကို တေ့လိုက်သည်။
ပင်စီ ခါးလေးခွက်သွားပြီး ဖင်လေးက ပို၍ထောင်တက်လာသည်။ ဂျင်မီ၏ လက်တစ်ဖက်က ပင်စီ၏ ပုခုံးတစ်ဖက်ကို လှမ်း၍ဆွဲလိုက် လီးကိုဖိ၍ သွင်းလိုက်သည်။ “ဗြစ်…အိုး…..ပြစ်…ပြစ်…..ပလပ်…..ဖွတ်….အိုး…အိုး…´ခံစားရခက်လှသောကြောင့် ပင်စီမှာ လေးဘက်ထောက်လျှက်မှ သူမ၏ ခေါင်းလေးကို တွင်တွင်ခါရမ်းလိုက်သည်။ သူမ၏ လည်ပင်းမှ အောက်ဖက်သို့ တွဲလောင်းလေးကျနေသော ဆွဲကြိုးလေးထိပ်မှ ဆွဲပြားလေးမှာဘယ်ညာ သွက်သွက်ခါယမ်းသွားသည်။ လီးတစ်ဆုံးဝင်သွားသည်နှင့် ဂျင်မီကသူမ၏ ပုခုံးကိုဆွဲ၍ဆွဲ၍ နောက်မှနေ၍ ဆောင့်ဆောင့်လိုးသည်။ “ပြွတ်…ပြွတ်…..ပလစ်…ပြွတ်…စွပ်…..စွပ်…ဖွတ်…..အား…..အား……ဒါလင်ရယ်…..အိုး….အိုး….´´ လီးထွားထွားကြီး စောက်ပတ်ထဲအပြည့်အကြပ်ဝင်နေပေမယ့် အားရပုံမရသော ပင်စီက သူမ၏ ဖင်လုံးလုံးလေးကိုနောက်သို့ပြစ်ပြစ်ဆောင့်ဆောင့်ပေးသည်။
“ပြွတ်…ပလွတ်…ပြွတ်..ပြစ်…အိုး…ဂွတ်…ရက်စ်….ရက်စ်…..အား….ဟား…..အွတ်…..စွပ်……စွပ်….ပြွတ်´´ ပင်စီက သူမ၏လက်နှစ်ဖက်ကို ရှေ့သို့ကျားကန်သလိုထောက်၍ တောင့်၍ခံသည်။ နောက်မှ ဂျင်မီကလည်း အားရပါးရဆောင့်သည်။ ဂျင်မီ၏ လက်တစ်ဖက်က ပင်စီ၏ ပုခုံးတစ်ဖက်ကိုဆွဲထားပြီး ကျန်လက်တစ်ဖက်က ကုန်းထားသော သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးမှ ပတ်လျှိုကာ တွဲလောင်းလေး လှုပ်ခါနေသော နို့အုံလေးတစ်ဖက်ကို ဆုပ်ညှစ်ပြီးဆောင့်သည်။ ဂျင်မီ၏ ဆောင့်အားက ပင်စီကို ရှေ့သို့ဟပ်ထိုးလဲကျသွားမတတ် ဖြစ်နေသည်။ “ပြွတ်…..ပြွတ်….ပလွတ်…..စွပ်…..စွပ်…အိုး…ဒါလင်….ဂွတ်….ဂွတ်…အိုး….အိုး´´ ပင်စီခေါင်းလေးမော့မော့တက်သွားပြီး ဖင်လေးခါယမ်းသွားသည်။ ဂျင်မီမှာလည်း နောက်ကနေဒလစပ်ဆောင့်လိုးနေရင်း ဝမ်းခေါင်းသံဖြင့် `အီး´ကနဲ ငြီး၍ သူ၏ခါးကြီးမှာ တွန့်တွန့်သွားပြီး ပင်စီ၏ ခါးကိုဖက်လိုက်ရာမှာ အိပ်ယာပေါ်သို့ နှစ်ယောက်သား မှောက်လျှက်သားကျသွားလေတော့သည်။
ကုတင်ဘေးတွင် ချွတ်ချထားခဲ့သော အဝတ်အစားများကို ကောက်ယူ၍ဝတ်နေရင်း ပင်စီ၏မျက်လုံးများက စောစောက ဂျင်မီဆွဲပြားလေးသွားယူစဉ်က ပြန်၍မပိတ်ခဲ့သော ဘီဒိုထဲသို့ အကြည့်ကရောက်သွားသည်။ “ဟယ်……လှလိုက်တဲ့ ဘူးလေး´´ အိပ်ယာထက်တွင် မျက်လုံးလေးမှိတ်၍ မှိန်းနေသော ဂျင်မီက မျက်လုံးဖွင့်၍ကြည့်လိုက်သည်။ ဘီဒိုထဲမှ အနီရောင်ဖဲပြားလေးချည်ထားသော ဘူးလေးကို ပင်စီကလှမ်း၍ ယူလိုက်သည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ပြီးတော့ ပင်စီက ဖဲပြားလေးကို ဖြည်၍ဘူးလေးကိုဖွင့်လိုက်သ်ည။ “အိုး….ဂေါ့…..လှလိုက်တဲ့ စိန်လက်စွပ်လေး´´ဂျင်မီ ပြုံးလိုက်ပြီး ဝတ်လစ်စလစ်ဖြင့်ပင် ထ၍သူမ၏အနားသို့ လျှောက်လာသည်။ “ဒါ….ဒါ…..ဘယ်သူ့အတွက်လဲ ဂျင်မီ´´ ဂျင်မီက သူမကို ပြုံး၍ကြည့်လိုက်ပြီး သူမ၏လက်ထဲမှ စိန်လက်စွပ်ဘူးလေးကို လှမ်း၍ဆွဲယူလိုက်သည်။ “ဒါ… ပင်စီအတွက်ပဲပေါ့….ဒါပေမဲ့ အခုတော့ မရသေးဘူး….´´ “ဟင်…..ဘယ်တော့….ဘယ်တော့ပေးမှာလဲ´´တပ်မက်မှုနှင့် ဘူးထဲမှ စိန်လက်စွပ်လေးကို ကြည့်ရင်းပင်စီ ကမန်းကတန်းမေးလိုက်သည်။ “လာ…ပြောပြမယ်´´ ပင်စီ၏ နားရွက်နားသို့ ပါးစပ်ကိုကပ်၍ ဂျင်မီက တိုးတိုးလေးပြောလိုက်သည်။ ထိုစဉ်တွင် ပင်စီ၏မျက်နှာ၌ အရောင်အမျိုးမျိူးပြောင်း၍သွားသည်။ ပြောပြီးသည်နှင့် ဂျင်မီက လက်ထဲမှ ဘူးလေးကို ဖဲပြားလေးပြန်ချည်ကာ ဘီဒိုထဲပြန်ထည့်၍ ဘီဒိုတံခါးကို ပိတ်လိုက်သည်။ ဝမ်းနည်းသလိုလို ဒေါသဖြစ်သလိုလိုဖြစ်နေသော်လည်း သူမ၏မျက်လုံးလေးတွေကတော့ အရောင်တဖြတ်ဖြတ် တောက်၍နေသည်။
“ဘယ်နဲ့လဲ ပင်စီ“ “ဂျင်မီ တစ်ကြိမ်ဘဲနော်….´´ “ရက်စ်…ဝမ်းတိုင်း….ဝမ်းတိုငိး´´ “အို….ကေ´´ ပင်စီက လက်မလေးထောင်၍အပြော ဂျင်မီက သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကို ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်း၍ ဖက်ထားလိုက်လေတော့သည်။ဘိုသွေးပါသူ အထက်တန်းစားများ၏ အိပ်ခန်းက ရှယ်လီအဖို့ အားကျဖွယ် အံသြဖွယ်ရာဖြစ်နေပေသည်။ အိပ်ခန်းကို လှည့်ပတ်၍ကြည့်နေသော ရှယ်လီကို ကြည့်ပြီး ပင်စီကပြုံး လိုက်သည်။ “ထိုင်လေ ရှယ်လီ´´ “ ရက်စ်´´ ပင်စီ၏ အသံကြားရတော့မှ သတိဝင်လာပြီး ရှယ်လီမှာ ကုတင်စောင်းတွင် ဝင်၍ထိုင်လိုက်သည်။ ပင်စ၊ီက သူမကိုပြုံးပြလိုက်ပြီး ကိုယ်ပေါ်မှ အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်နေသည် ။ နောက်ဆုံး ပင်စီ၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် ဘရာစီယာနှင့် စပ်စမိုင်နာလေးတို့သာ ကျန်တော့လေသည်။ သာမန်အားဖြင့် ပင်စီက ရှယ်လီလောက် ကိုယ်လုံးမထွားသော်လည်း အထက်တန်းစားတွေမို့လားမသိ၊ အားကစားလိုက်စားပြီး အချိုးကျလှသည်။ မိန်းမချင်းပင် ဖြစ်သော်လည်း ရှယ်လီက ပင်စီကိုကြည့်ပြီး မနာလိုဖြစ်မိသည်။ “ခဏလေးနော် ရှယ်လီ´´ ပင်စီ အခန်းပြင်သို့ထွက်သွားသည်။ တစ်အိမ်လုံးတွင် သူမတို့နှစ်ယောက်ထဲသာရှိသည်။ တစ်ခဏအတွင်း ပင်စီအခန်းတွင်းသို့ ပြန်၍ဝင်လာသည်။ သူမ၏ လက်ထဲတွင် သစ်သီးဖျော်ရည်နှစ်ခွက် ပါလာသည်။
“ရော့ ရှယ်လီ…..မင်းကံကောင်းလို့ သောက်ရတာ…..ဒက်ဒီအစ်ကို ဘိလပ်ကပို့လိုက်တာ…..တစ်ဗူးဘဲ ကျန်တော့တာ…..´´ရှယ်လီက သစ်သီးဖျော်ရည်ကို လျှာဖျားလေးနှင့်တို့ကြည့်ပြီး ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာဖြင့် တစ်ဖန်ခွက်လုံး ကုန်အောင်သောက်ပြစ်လိုက်သည်။ ဖျော်ရည်မှာ လျှာပေါ်တွင် ရှတတလေးခံစားရပြီး သောက်လိုက်တော့ လည်းချောင်းဝမှစ၍ ပူတူတူလေးဆင်းသွားသည်။ ပင်စီကလည်း သူမလက်ထဲမှ သစ်သီးဖျော်ရည်ကိုကုန်အောင်သာက်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ဖန်ခွက်နှစ်လုံး စလုံးကို မှန်တင်ခုံတွင် တင်လိုက်သည်။ ဘိလပ်က သစ်သီးဖျော်ရည်က စွမ်းလှသည်။ အရသာရှိရုံတင်မဟုတ်သေး ရှယ်လီ၏ တစ်ကိုယ်လုံးဖိန်းရှိန်းရှိန်းလေးဖြစ်လာသည်။ ပင်စီက သူမ၏ရှေ့သို့ ပြန်လျှောက်လာပြီး ရှာယ်လီနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရပ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် သူမ၏ ကိုယ်ပေါ်တွင်ကျန်နေသေးသော အဝတ်အစားများဖြစ်သည့် ဘရာစီယာနှင့် စပ်စမိုင်နာလေးတို့ကို ချွတ်ချလိုက်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုသာမက သူတစ်ပါးကိုယ်ပါ ဝတ်လစ်စလစ်ဖြင့် မမြင်ဖူးသော ဘိုစိတ်ဝင်နေသည့် ဗမာမလေး ရှယ်လီမှာ ပင်စီကိုကြည့်ရင်း မျက်လုံးတွေဝိုင်း သွားရုံသာမက ရင်တွေပါ တဒိန်းဒိန်းခုန်၍လာသည်။ “ရှယ်လီ……အိုင်မလှဘူးလား´´ “ရက်စ်…………လှတယ်´´ ပင်စီ၏ ဝတ်လစ်စလစ်ကိုယ်လုံးကို ကြည့်ရင်း ရှယ်လီဘယ်လိုဖြစ်သည်မသိ။ နားထင်မှ တဒိတ်ဒိတ်သွေးတွေတိုး၍ ခေါင်းထဲတွင် ရီတီတီဖြစ်လာသည်။
“ယူကော အိုင်လောက်လှပါ့မလား´´ “ဘာ……ဘယ်လို´´ ဒီလိုစကားမျိုး ဘယ်မိန်းကလေးမှ ကျေနပ်ပြီး ငြိမ်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ ပင်စီ၏ စကားကြောင့် ရှယ်လီထောင်းကနဲ ဒေါသထွက်သွားသည်။ “မင်း အဝတ်အစားတွေ ချွတ်လိုက်ပါလား….ကိုယ်နဲ့ယှဉ်ကြည့်ရအောင်လား´ပင်စီ စကားတောင်မဆုံးသေး ရှယ်လီက သူမ၏ကိုယ်ပေါ်မှ အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်ပြစ်လိုက်သည်။ ခဏအတွင်း ရှယ်လီကိုယ်ပေါ်တွင် ဝတ်ထားသော အတွင်းခံဘောင်းဘီလေး နှင့် ဘရာစီယာလေးတို့သာ ကျန်တော့သည်။ မခံချင်စိတ်ကြောင့်သာ အကုန်ချွတ်ပြစ်လိုက်သည်။ ကျန်တာတွေကိုတော့ ဆက်ပြီးချွတ်ဖို့ ရှယ်လီဝန်လေးနေသည်။ “အကုန်ချွတ်လိုက်လေ ရှယ်လီ…..အိမ်ထဲမှာ ယူနဲ့အိုင်နှစ်ယောက်ဘဲ ရှိတာ….´´ ဘရာစီယာပေါ်သို့ ရှယ်လီ၏လက်က လှမ်းလိုက်ပေမယ့် ချွတ်ဖို့ရာ တုန့်ဆိုင်း၍နေသည်။ ပင်စီရှေ့သို့ တိုးလိုက်ပြီး ရှယ်လီ၏ ဘရာစီယာကို ချွတ်ပေးလိုက်သည်။ နဂိုထဲက ရှယ်လီမှာ ပင်စီထက် ထွားကြိုင်းတုတ်ခိုင်သူမို့ ရင်သားတွေက ပင်စီရင်သားတွေထက် ပိုမိုဖွင့်ထွားနေသည်။ “ဘဲရီး ဗြူးတီးဖူးဘဲ´´ ပင်စီက ပြောရင်း ရှယ်လီ၏ ဖွေးနုသော ရင်သားနှစ်မွှာကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် စုံကိုင်လိုက်သည်။ “အို….´´ မည်သူကိုင်တာမှ မခံခဲံ့ဖူးသော ရှယ်လီက ကြက်သီးလေးတွေထကာတွန့်သွားသည်။ ပင်စီကမူ ရှယ်လီ၏ နို့အုံလေးများကို ဖွဖွလေးပွတ်သပ်ပေးရင်း ချပ်ဝင်နေသောနို့သီးလေးတွေကို လက်မထိပ်လေးဖြင့် ပွတ်ရင်းဆွဲဆွဲထုတ်ပေးသည်။
အိုး..ပင်စီ….ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ…. ရှယ်လီ၏ အသံက ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်ကာ အက်တက်တက်ဖြစ်နေသည်။ အရသာရှိတယ်မို့လား ရှယ်လီ…. အို….ဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူး…ရင်ထဲမ၊ှာ မွန်းကြပ်လာသလိုဘဲ…´´ရှယ်လီ၏ တစ်ကိုယ်လုံး ရှိန်းဖိန်းထူပူလာရုံမျှမက စောစောက ရီတီတီဖြစ်နေသော သူမ၏ခေါင်းကမူးနောက်နောက်ဖြစ်၍လာသည်။ ချပ်ဝင်နေသော ရှယ်လီ၏ နို့သီးခေါင်းလေးတွေက အပေါ်သို့ တစ်ဖြည်းဖြည်းထောင်၍တက်လာသည်။ ဗြုံးကနဲ ပင်စီက ရှယ်လီ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ဆွဲဖက်လိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းကို ဆွဲစုပ်ပြစ်လိုက်သည်။ ရှယ်လီအငိုက်မိသွားသဖြင့်ဘာမှမတတ်နိုင်။ ပင်စီ၏လျှာက ရှယ်လီ၏ ပါးစပ်ထဲတွင် လျှောက်၍မွှေနေသည်။ လျှာချင်းလည်း ပွတ်၍ပေးသည်။ ရှယ်လီ မျက်လုံးတွေစင်းကျသွားပြီး သူမ၏တစ်ကိုယ်လုံး လေထဲတွင် မြောက်တက်နေသလို ခံစားနေရသည်။ ပင်စီက `ပြွတ်´ကနဲ နှုတ်ခမ်းချင်းဆွဲ၍ခွာလိုက်တော့ စင်းကျနေသောမျက်ခွံလေးကိုလှန်ကာ ရှယ်လီမှာ ပင်စီ၏ နှုတ်ခမ်းတွေကို လိုက်ကြည့်နေမိသည်။ ပင်စီ၏ နှုတ်ခမ်းတွေက သူမ၏ရင်သားတွေပေါ်ရောက်သွားပြီး ကုန်း၍စို့လိုက်သည်။
အိုး……အ….အင်း…ပင်….ပင်စီ…..အိုး…ဂေါ့….´တစ်ကိုယ်လုံးဖျင်းကနဲဖြစ်သွားရင်း နောက်ဖက်သိူ့အားလွန်၍သွားသော ရှယ်လီ၏ကိုယ်လုံးလေးအား ပင်စီက မွှေ့ယာပေါ်သို့ လှဲသိပ်လိုက်သည်။ ပင်စီက ရှယ်လီ၏ နို့တစ်လုံးကိုစို့လိုက်၊ တစ်လုံးကိုလက်ဖြင့် ဆုပ်နယ်လိုက်ဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေသည်။ ရှယ်လီ ခေါင်းထဲတွင်မူးနေပြီး တစ်ကိုယ်လုံး မလှုပ်ချင်အောင် နွမ်းနယ်လေးလံ၍ လာသည်။ သူမကို ထိတွေ့နေသော ပင်စီ ကင်းကွာပျောက်သွားမည်ကို စိုးရိမ်နေသည်။ ထိုအချိန်တွင်ပင် ပင်စီက ရှယ်လီ၏ ခါးမှစပ်စမိုင်နာလေးကို ဆွဲ၍ချွတ်လိုက်သည်။ ရှယ်လီဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်၍အသွား ပင်စီ၏လက်က သူမ၏ပေါင်ကြားထဲရောက်၍သွားပြီး ရှယ်လီ၏ တိုနံ့နံ့စောက်မွှေးလေးတွေကို လျောတိုက်ပွတ်လိုက်ပြီး စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုပေါ်သို့ ဆက်၍ပွတ်လိုက်သည် ။ မူလထက်ပို၍ ဖောင်းထလာမှန်း သိသလှသော စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေး နှစ်ခု၏ စပ်ကြားမှ အရည်လေးတွေက ပင်စီ၏လက်ကို စိုစွတ်၍ သွားသည် ။
“အတော်လွယ်တဲ့ မိန်းမဘဲ´´ ဟူ၍ ပင်စီ စိတ်ထဲမှ ကောက်ချက်ချလိုက်သည်။ “ရှယ်လီ ကောင်းလား…..ဘယ်လိုနေလဲ´´ “အိုး….ဂွတ်….ဂွတ်…..ကောင်းတယ်´´ “အိုင် ဆက်လုပ်ပေးရမလား´´ “ရက်စ်….ဆက်လုပ်ပေးပါ ပင်စီ´´ “ဒါ…..အိုင်မို့လို့ အိုင့်နေရာမှာ ယောက်ကျားလေးတစ်ယောက်သာဆိုရင် ရှယ်လီ ခုထက်ကောင်းမှာသိလား´´ “ဟုတ်လား´´ “ဟုတ်တယ်….ဒါယောက်ကျားတွေက တို့မိန်းမတွေကို လုပ်ပေးရမယ့်ဟာတွေဘဲ..´´ “အိုး…ဒီမှာ ယောက်ကျားမှမရှိဘဲ´´ ပင်စီက ရှယ်လီကိုဘာမှပြန်မပြောဘဲ ရှယ်လီ၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ သူမ၏လက်ခလယ်ကို လျှောတိုက်၍ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ “အ….အင်း…အိုး…ပင်စီ…..ဘယ်လို…..အ….အ´´ ပင်စီက သူမ၏လက်ချောင်းကို သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် လုပ်ပေးသည်။ ကျန်လက်တစ်ဖက်ကလည်း စောက်စေ့လေးကို ပွတ်ပွတ်ပေးသည်။ “ပင်စီ့ လက်နေရာမှာ ယောက်ကျားပစ္စည်းကြီးဆို ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ ရှယ်လီ…..´´ “အင်း….ရက်စ်….ဟူတ်တယ်….ဟုတ်တယ်…´´ဗိုက်ကလေးက ချပ်ချပ်သွားလိုက် ဖင်လေးကလုံးကနဲ ကော့ကော့တက်လာလိုက်ဖြစ်နေရင်း ရှယ်လီကပြောသည်။ ရှယ်လီ၏ စောက်ခေါင်းထဲတွင် စိုစိုရွှဲရွှဲနှင့်ထွက်ထွက်လာသော အရည်ကြည်လေးတွေမှာ တဖြေးဖြေးပြစ်၍ပြစ်၍လာကြောင်း `ပင်စီ´ သတိပြုမိလိုက်သည်။
“ရှယ်လီ…..ပိုကောင်းလာတယ်မို့လား´´ “ကောင်းတယ်……ကောင်းတယ်…..ကျွတ်…. .ယောက်ကျားတစ်ယောက်သာဆို သိပ်ကောင်းမှာဘဲ….ဟင်း…ဟင်းးး´´ ရှယ်လီ၏ အသိဉာဏ်တွေ ကွုယ်ပျောက်စပြုလာပြီဖြစ်ကြောင်း ပင်စီသတိထားလိုက်မိသည်။ ရှယ်လီ၏အသားလေးတွေမှာ တဆတ်ဆတ်တုန်နေသည်၊ ရှယ်လီ၏စောက်ဖုတ်အုံလေး မှာလည်း အတော်ကြီးဖောင်းမို့ခုံးတက်ကာ စိုရွှဲ၍ နေပြီဖြစ်သည်။ “အိုင်….ယောက်ကျားတစ်ယောက် သွားခေါ်လိုက်ရမလား ရှယ်လီ´´ “သိုင်းကြူး…ရတယ်….ပင်စီ ကောင်းသလိုသာလုပ်….အိုင်တော့ ဘယ်လိုဖြစ်နေမှန်းမသိဘူး… .သေတောင်သေလိုက်ချင်တယ်…..ဟင်း…..ဟင်းးးး´´ရှယ်လီမချိမဆန့်ဖြစ်နေချေပြီ။ အနောက်တိုင်းသားများမှာ ဖိုမကိစ္စများတွင် အရမ်းကို ပွင့်လင်းကြကြောင်း ဘိုဆန်ချင်သော ရှယ်လီက သိထားသည်။ ပင်စီက ကုတင်ပေါ်မှဆင်းပြီး သူမ၏ အဝတ်အစားများကိုယူ၍ အခန်းအပြင်သို့ထွက်သွားလေသည်။ ပင်စီ အခန်းထဲမှ ထွက်၍အသွား အခန်းထဲသို့ဝင်လာသူကတော့ ဂျင်မီပင် ဖြစ်လေသည်။ တစ်ကိုယ်လုံး အဝတ်အစား မရှိဘဲ သူ့လိင်တန်ကြီးကတောင်မတ်၍ နေသည်။ စောစောက ရှယ်လီတစ်ယောက် ပင်စီလုပ်ပေးသဖြင့် `ထ´ နေပုံကိုချောင်းကြည့်၍ ဂျင်မီလည်း စိတ်တွေထနေတာဖြစ်သည်။ ရှယ်လီမှာတော့ အိပ်ယာပေါ်တွင် မျက်လုံးလေးများမှိတ်၍ ငြိမ်နေပြီးအမောဖြေနေပုံရသည်။ အနားသိူ့ ဂျင်မီရောက်လာတော့ ရှယ်လီက မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်သည်။
“ဟင်….ဂျင်မီ…..ဒါ…..ဒါ´´ဂျင်မီ၏ ပေါင်ကြားမှ ထောင်မတ်နေသော အရာကြီးကိုမြင်လိုက်ရပြီး စကားက ရပ်သွားသည်။ ရှယ်လီမှာ ခံစားရမှုကြောင့် မနေနိုင်ဖြစ်လွန်း၍သာ ပင်စီကို ပြောလိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ တကယ့်တကယ် ဂျင်မီအနားရောက်လာတော့ ရှယ်လီလန့်သွားသည်။ ဒါပေမယ့် လီးကြီးကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်မိပြီး စိတ်ညှို့ခံရသူပမာ ငြိမ်၍ကျသွားသည်။ ဤသည်ကို ဂျင်မီက အခွင့်ကောင်းယူ၍ ကုတင်ပေါ်တက်လိုက်ပြီး ရှယ်လီ၏တစ်ကိုယ်လုံးကို သိမ်းကြုံးဖက်ကာ နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်နမ်းလိုက်သည်။ ဟုတ်သည် ။ မိန်းမချင်းထက် ယောက်ကျားတစ်ယောက်၏ အထိအတွေ့အနမ်းက အစွမ်းထက်လှသည်။ ရှယ်လီသူ့ကိုယ်ကြီးကို ပြန်ဖက်ထားမိသည်။ ဂျင်မီက သူမ၏ တင်ပါးကြီးများ၊ပေါင်တန်ကြီးများကို လက်ဖြင့်ပွတ်ပေးနေပြီး ဂျင်မီ၏မျက်နှာက ရှယ်လီ၏ ရင်သားများပေါ်သို့ ရောက်၍ သွားကာ နို့သီးလေးတွေကိုစို့၍ပေးသည်။ စောစောက ပင်စီကြောင့် တဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်ခဲ့ရသည့် မီးခဲပြာဖုံးဖြစ်သွားရသည်မှ ယခု ဂျင်မီကြောင့် ကာမမီးတွေ တဟုန်းဟုန်းထ၍ တောက်လောင်ပြန်လေသည်။ “အင်း…..ဂျင်မီ….ဂျင်မီရယ်….အိုး….အို…ရက်စ်´´ ရှယ်လီ ရင်ဘတ်လေးကော့၍ကော့၍ တက်သွားသည်။ ယခု အချိန်တွင် ရှယ်လီသောက်ထားသော သစ်သီးဖျော်ရည်တွင်ပါသည့် အယ်ကိုဟောလ်၏ အစွမ်းကလည်း ရှယ်လီ၏ တစ်ကိုယ်လုံးကို လွှမ်းခြုံ၍နေသည်။ တောက်လောင်လာသော ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှ ကာမမီးကြောင့် ရှယ်လီမှာ ဘယ်လိုမှမနေနိုင်တော့ဘဲ မချိမဆန့်ခံစား၍ လာရသည်။
“ဂျင်…..ဂျင်မီ….အိုး….အိုး…..ပင်စီ လုပ်သလို….လုပ်…လုပ်ပေးစမ်းပါ…´´ ရှယ်လီမှာ သူမ၏ဖင်ကြီးကို ကြွကြွပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးကို ကော့၍ကော့၍ ပြောသည်။ စောစောက ပင်စီ ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာ ဂျင်မီက ချောင်းကြည့်နေ၍ သိခဲ့ပြီးသားဖြစ်သည် ။ ဂျင်မီမှာ ရောက်လာကထဲကလည်း ရှယ်လီ၏ စောက်ပတ်ကြီးကို လုံးဝမထိတွေ့ရသေး၍ ရှယ်လီမှာ အားမလိုအားမရနှင့် မချိမဆန့်ခံစားနေရတာဖြစ်သည်။ ဂျင်မီက သူမ၏ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ခြေချင်းဝတ်မှပူးကိုင်ပြီး ဆွဲမြှောက်လိုက်ကာ လန်တက်သွားသော တင်ပါးဆုံကြီးနှစ်ခုရှေ့သို့ သူ၏ဒူးနှစ်လုံးကို ထောက်လိုက်ကာ ပေါင်နှစ်ချောင်းပူးထားသဖြင့် အစ်ထွက်နေ သော စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားဆူဆူအစ်အစ်လေးကြားသို့ သူ၏လီးထိပ်ကြီးကို တေ့၍ဖိသွင်းသည် “အမေ့……အ…အ´´ အပျိုလည်းဖြစ်၊ ပေါင်နှစ်လုံးကလည်း ကပ်၍ထား၊ လီးကလည်း ကြီးသဖြင့်မဝင်ပေ။ ဂျင်မီက ရှယ်လီ၏ ခြေချင်းဝတ်တစ်ဖက်ဆီကို သူ၏လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ခွဲကိုင်လိုက်ပြီး ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ဆွဲ၍ကားလိုက်သည်။ ထိုအခါတွင် စေ့နေသော နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုက ကွဲဟ၍သွားသည်။
လီးကိုတေ့ပြီး ဖိသွင်းသည်။ “ဗြစ်…အိုးဂေါ့….ဗြစ်…..ဗြစ်….အမလေး….ဗြစ်….အိုး…ရက်စ်…အား….အား´´ စိတ်တွေထနေသော ဂျင်မီကလည်းမညှာပါ။ လီးကိုတဆုံးဝင်အောင် အတင်းဖိ၍ သွင်းသည်။ ရှယ်လီ၏ မျက်နှာလေးတစ်ခုလုံး ချွေးတွေပြန်နေသည်။ လီးတဆုံးဝင်သွားတော့ ဖိသွင်းထားပြီးလက်ထဲမှ ရှယ်လီ၏ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို သူ၏ခါးသို့ခွ၍ ချိတ်ပေးလိုက်ပြီး လီးကိုတစ်ဝက်လောက်ပြန်၍ဆွဲထုတ်ကာ ရှယ်လီ၏နို့နှစ်လုံးကိုဆွဲဆွဲ၍ ဆောင့်လိုးသည်။ “ပြွတ်….ပြစ်….အို…အင်း…ဗြစ်…..ဗြစ်….အိုး..ရက်စ်…အား…အား´´ ဂျင်မီ ဒီလောက်ဆောင့်နေတာတောင် မဖြုံသောရှယ်လီကို ဂျင်မီက ကြည့်ပြီး တော်တော်ခံနိုင်တဲ့ မိန်းမဟု ကောက်ချက်ချမိသည် ။ လီးမဝင်ဘူးသေးသော စောက်ပတ်မို့လိုး၍ ကောင်းလှသည်။ စေ့ကပ်တင်းကြပ်၍နေသည်။ စောက်ပတ်လေးက လီးကိုဆွဲညှစ်ထားသလို တင်းကြပ်၍နေသည်။ ပင်စီအား လက်ဆောင်ပေးရမည့် စိန်အတုလက်စွပ်နဲ့ဆိုလျှင် သူ့အတွက် အတော့်ကို အမြတ်ထွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ဂျင်မီတွေးရင်းကျေနပ်စွာပြုံးလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ခုလောက်ဆို ပင်စီက ရှယ်လီနှင့်သူတို့ လိုးကြသည်ကို မကြည့်ဘဲမနေ။ ချောင်းကြည့်နေမည်မှာ သေချာလှသည်။
ဒီလိုချောင်းကြည့်ပြီး စိတ်တွေထနေမှာသေချာသည့်အတွက် ရှယ်လီပြီးလျှင် ပင်စီနှင့် ဆက်ရန်လည်း ဂျင်မီတွေးမိလိုက်သည်။ “ပြွတ်……ပြွတ်……ပလွတ်…..ပြွတ်…အိုး…အင်း…အင်း…ရက်စ်…အိုး…အို.´´ လီးကြီးက သူမစောက်ခေါင်းထဲဆောင့်၍ ဝင်သွားတိုင်း ရှယ်လီမှာ သူမ၏ဗိုက်သားလေးကို ချပ်၍ ချပ်၍ စောက်ပတ်လေးကို ကော့ကာကော့ကာ တင်း၍ခံသည်။ “ပြွတ်…ပလွတ်….ပြွတ်…စွပ်….စွပ်…..အီး…အီး…အင်း….အင်း´´ “ရှယ်လီ ဘယ်လိုနေလဲ´´ “ယူ့ဟာကြီးဝင်လာတိုင်း အိုင့်တစ်ကိုယ်လုံးကို ဆိမ့်ဆိမ့်သွားတာဘဲ…..နာနာဆောင့်လိုက်ရင် ပိုပြီးဆိမ့်တယ် ရင်ထဲကို ကျင်ကျင်သွားတာဘဲ´´ “ပြွတ်….ပြွတ်…စွပ်…စွပ်….ဖွတ်….ဖွတ်…လုပ်စမ်းပါ..နာနာလေး…အိုး…ပြွတ်…ဒုတ်…ပြွတ်.ဗြစ်…အိုးဂွတ်…ရက်စ်..အား….အမလေး…ဂွတ်…ဂွတ်….´´ ဂျင်မီက သူမ၏ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ခြေချင်းဝတ်မှ ဗွီပုံသဏ္ဍာန်ထောင်၍ ကိုင်ကာရှိသမျှ အားကိုသုံး၍ ဆောင့်လိုးပစ်သည်။ သူက နာနာဆောင့်လေ ရှယ်လီက ကျေနပ်လေ ဖြစ်နေသည်။ ရှယ်လီ ဘယ်လိုဖြစ်လာသည်မသိ။ တစ်ကိုယ်လုံး တုန်တုန်ယင်ယင်ဖြစ်လျှက် သူမ၏အသက်ရှုသံတွေက တရှုးရှုးဖြင့် ဆက်တိုက်ကြီးမြန်လာသည်။ “ပြွတ်….စွပ်…..ဖွတ်…..ပြွတ်…..စွပ်…..ဖွပ်…..အိုး…အား….အူး….ဂျင်….ဂျင်မီ….အိုး…အိုး´´ ဂျင်မီ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်ထားသော သူမ၏ ခြေထောက်နှစ်မှာ တဆတ်ဆတ်ရမ်းခါ၍သွားသည်။ ရှယ်လီပြီးသွားကြောင်း ဂျင်မီသိလိုက်သဖြင့် သူ့စိတ်တွေကိုလျှော့၍ ခပ်သွက်သွက် လေးဆောင့်ကာ လရည်များကို ရှယ်လီ၏ အသစ်စက်စက် သားအိမ်လေးထဲသို့ ပန်းထုတ်လိုက်ရင်း ပြီးသွားလေတော့သည်။….ပြီးပါပြီ